Degmada Kaaraan oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Degmada Kaaraan oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka
Degmada Kaaraan oo u gudubtay wareegga labaad ee tartan cilmiyeedka
Habeenkii Lixaad tartan cilmiyeedka degmooyinka gobollada dalka ee Warbaabinta Qaranka, isla markaana uu taabgelinayo maamulka gobolka Benaadir, waxaa ku tartamay Boosaaso oo ka tirsan gobolka Bari iyo Kaaraan o ka tirsan gobolka Benaadir.
Tartranka oo xiiso gaar ah lahaa, waxaa labada degmo la hor-dhigay toddoba su’aal degmadiiba, iyadoo sidoo kale qeybta koobaad ee tartanka lagu nastay warbixinnadii ka hadlayey Taariikhda Boosaaso iyo Kaaraan.
Dhammaadka tartanka guddiga ayaa soo gudbiyey natiijada.
Kaaraan oo ka tirsan gobolka Benaadir waxaa la weydiiyey toddobo su’aal, waxa ay si sax ah uga jawaabeen saddex su’aal afar su’aal ayeey iska qaldeen, si ka faa’ideysi ahna hal ayeey uga jawaabeen sidaa darteed waxa ay uruursadeen sideed dhibcood (8 dhibcood).
Boosaaso iyaguna waxaa la weydiiyey toddoba su’aal, waxa ay ka jawaabeen laba su’aal, shan waa ay ka qaldeen wax ka faa’ideysi ahna ma helin, iyagana waxa ay heleen afar dhibcood
Tabasho Boosaaso ka timid
Degmada Boosaaso ayaa soo gudbisay cabasho ku aaddaneyd su’aal la weydiiyey oo ay si qalad ah uga jawaabeen, guddiga iyo macallimiintii su’aallaha soo diyaariyey ayaa ka qanciyey tabashadooda Boosaaso, sidaas ayeeyna ku akhbaleen in looga adkaadey.
Habeen dambe, waxaa tartami doona degmooyinka kala ah Dharkeynley oo gobolka Benaadir ka tirsan iyo Kismaayo oo ka tirsan Jubbada Hoose.
Previous articleDalka Boqortooyada Sacuudiga oo loo qaaday askar qaba dhaawacyo kala duwan
Next articleMaamulka Gobolka SH/Hoose oo deeq raashin iyo daawo gaarsiiyay degmada Baraawe